२०७४, २३ मङ्सिर शनिवार ०६:२५
प्रकाशित मिति : २०७४, २३ मङ्सिर शनिवार ०६:२५
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका यादव विशेषज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त
धनुषा । प्रदेश नं २ को भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ध्रुवनारायण यादवलाई
ओली र प्रचण्डको फरक तस्वीर तुलना गर्दै सूर्य थापाले भने- ‘बुझ्ने आआफ्नै स्तर हुन्छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेकोबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी
आज प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बुटवलमा विरोध सभा गर्दै
रूपन्देही । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल पक्षले
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राजनैतिक
अमेरिका र बेलायतमा कति मानिसले लगाए कोरोना भ्याक्सिन ?
इटालीका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा
चट्टानमाथि आकर्षक मन्दिर